खुसिको खबर ! कोरोनाको बिश्वकै पहिलो भ्याक्सिनले पुटिनकी छोरीमा काम गर्‍यो, बिश्वभरी छायो खुसि – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/खुसिको खबर ! कोरोनाको बिश्वकै पहिलो भ्याक्सिनले पुटिनकी छोरीमा काम गर्‍यो, बिश्वभरी छायो खुसि
खुसिको खबर ! कोरोनाको बिश्वकै पहिलो भ्याक्सिनले पुटिनकी छोरीमा काम गर्‍यो, बिश्वभरी छायो खुसि
एजेन्सी : आ’धिकारिकरुपमा कोरोनावि’रुद्धको भ्या’क्सिन दर्ता गर्ने रसिया विश्‍वकै पहिलो मुलुक बनेको छ। भ्या’क्सिनको पहिलो डो’ज राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकी छोरीलाई दिइएको थियो। पुटिनकी छोरीलाई कोरोनावि’रुद्धको दुई डो’ज भ्या’क्सिन दिइएको थियो। भ्या’क्सिनको दुई डोज दिएपछि उनको शरीरको तापक्रममा आएको परिवर्तन रेकर्ड गरिएको थियो।
पुटिनका अनुसार पहिलो डो’ज दिँदा उनको शरीरको तापक्रम ३८ डिग्री थियो। भ्या’क्सिनको दोस्रो डो’ज दिएपछि तापक्रम १ डिग्री झ’रेर ३७ डिग्री कायम भयो।तर केही समयपछि फेरि तापक्रम बढ्यो र विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कियो। पुटिनका दुई छोरी छन्। मा’रिया र कटरिना। भ्या’क्सिन दुई छोरीमध्ये कसलाई लगाइएको हो? यो प्रष्ट भएको छैन। तर पुटिनले सु’ई हा’नेपछि छोरीले स्वस्थ म’हसुस गरिरहेको बताएका छन्।
उनको शरीरमा धेरै मात्रामा ए’न्टीबडी बनिरहेको बताएका छन्। भ्याक्सिन कयौँ किसिमका जाँ’चबाट गु’ज्रिएको बताउँदै पुटिनले यो पूर्णतया सु’रक्षित सावित भएको उल्लेख गरेका छन्। रुसका स्वास्थ्य मन्त्री मि’खाइल मु’राश्कोका अनुसार विश्वभरका २० देशले उक्त भ्या’क्सिन स्पु’तनिक-बी का लागि प्रि-अर्डर गरेका छन्।रुसले ‘डा’इरेक्ट इ’न्भेस्टमेन्ट फन्ड’बाट भ्या’क्सिन ठूलो प’रिमाणमा बनाउन र विदेश प्र’वर्द्धन गर्न लगानी गरिरहेको छ।
रूसी वेबसाइटका अनुसार यो भ्या’क्सिन भारत, साउदी अरब, इ’न्डोनेसिया, फिलिपिन्स, ब्राजिल, मेक्सिको जस्ता देशले खरिद गर्ने इच्छा देखाएका छन्। रूसी वेबसाइटका अनुसार सन् २०२० को अन्तसम्ममा भ्या’क्सिनको २० करोड डो’ज तयार गर्ने यो’जना बनाइएको छ। यिनमा ३ करोड डो’ज रुसले आफ्ना लागि राख्दैछ। भ्या’क्सिनको उत्पादन सेप्टेम्बरमा सुरु हुनेछ। रुस तेस्रो चरणको परीक्षण कयौँ देशमा गर्ने यो’जनामा छ। यिनमा साउदी अरब, ब्राजिल, भारत र फिलिपिन्स छन्।